को’रोना परिक्षण नगर्नू भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्कासी किन दियो यस्तो क’डा निर्देशन ? सबैले थाहा पाउनुपर्ने – Dainik Sangalo
को’रोना परिक्षण नगर्नू भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्कासी किन दियो यस्तो क’डा निर्देशन ? सबैले थाहा पाउनुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृ’त्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको को’रोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले शं’कास्पद व्यक्तिको मृ’त्युपछि को’रोना परीक्षण नगर्न नगराउन भनेको हो । तर शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनुपर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरु १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘शवबाट नमुना निकाली कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने काम नगर्ने नगराउने ।’ यससम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने उनले बताए । को’रोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर अस्पताल पुगेका वा घरमै मृ’त्यु भएकाहरुको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
यसरी परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ सं’क्रमण पुष्टि भएका थुप्रै केस छन् । नेपालमा को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु भएकी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया महिलाको पनि मृ’त्युपछि मात्र को’रोना पुष्टि भएको थियो । तर अब सरकारले मृ’त्यु भइसककोहरुको पीसीआर टेष्ट नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
Prevदुखद खबर,आज असोज १ गते देखी अर्को आदेश न आएसम्म लक डाउन।पूरा पढ्नुहोस्
Nextदेशभरीका सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरुकालागि भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! जान्नुहोस् ;